Irreessi Mallatoo Tokkummaa fi Bilisummaa Oromooti
Yerro Jalqabaf Eebba siirna Irreesaa Belgium/Antwerpenti siirna hoo’aa fi jalala Oromumman kabajamee Olee Qabsoon Oromoo hundi farfamuun Gootoota Oromoo umuri gutuu ta’uu labsame.
Oromoo saba adunya kami caalaa waan hunda wallooti qaba. Bishan dhugaati ykn Hoora kasse hanga siirna ittin buluu, siiran Gadaati waan heedu walooti qaba keessa Irressi isaa tokko. Oromoon dhugga fi Oromoon enyumaa isaanti yomi ilee hin salfanee Hoor Antwerpen/Berhem jedhamuuti wal ga’uun Eebba Jaarsa Goota Oromo erga eebfmanin booda namoon adda adda ilee dabalatan eebsan jiru. Oromoo Irreechaa yamuu ayyaneefatuu adda, enyumma, bilisummaa isaa eegachuu fi gudifachuuf tokkummaa isaa cimisatee argamuu qaba jeedhan jiru. Ummani adda isaa, enyuma fi mirga isaaf hin falmanee dhabamuun isaa hin oluu, dabamuu irra of hambsuuf amoo eergaa diina utuu wal hin facasiin qabsoodhan bilisummaa Oromiyaa mirkaneesun Oromoo darara diina jala basuun diraqama hunda keenyati jeedhamera. Gooti Oromoo Obbo Xilahun Hirphasaa Ummata argamee jajabeessan jiru. Siirna Dargi fi TPLF hidhaman Yerro Dheera Gootota Oromoo waliin mana hidha kan turan obbo Xilahun Hirphassa Kayyoon Oromoo qaqaliin itii waregaman, hidhaman, tourchi hama issan irra ga’ee biyya isaanti argiaman utuu bakka hin ga’iin qabsoon dhabachuu hin qabu jeedha. Hidhan diina, reebichi, biyya koo irra ariatamuun fi midha irra ga’ee human gutuun hojeechu dhadhaban ilee kayyo fi gaafi ummata koo irra maqaan diina kami wajiin iyuu hin hirirre. Kanaaf dargagoon Oromoo qabsoo Gootoon Oromoo heedun iti waregama bakkan ga’uun Bilisumma Oromoo mirkanessun dirqama ta’uu isaa dhamatan.
Akkasumas Oromoon amanta adda adda qabuu hundi maliif irreessa irrati waliin kabajata kan jeedhuuf Ibsii Gababan qoophesitoon Irreechaa Belgium/Antwwerpen irra ibsa dhiyaatee irra akka hubaneeti. Kirtstan, Musilim fi Waaqeeffataan Oromoo kan waliin waaqeeffatanf Irreesi irrati waan waloon itti mariatamuu heedun waan jiruuf ta’uu isaatu ibsamee. Irrechaa Irraati waaqeefachuu qoofa utuu hin tanee waan waggati yerro tokko Oromoon hundi wal argee dhimmota guyya kana waliif dabarsuu qabuu keessa:-
Oromoon guyya kan wal ta’ee waqa isaa galateefata;
Guyya kana warii bar takka dhalatan guyya dhaloota isaan waloon kabajatuu;
Oromoon guyya kana seera tummamee labsa;
Jaarsiui biyya safuu fi seera Oromoo akka kabajamuu gorsa;
Oromoo guyya kan duudha fi adda isaa mulisuuf dhaloota dhufuti argisisa;
Goota isaa farsuun ni jajabeessa, ni eebsaa;
Diini ykn Beeli, yan dhukuba dadairban dhufaa jiru ilee yoo jiratee labsi dabarsa;
Haalma kana Oromoon biyya keessa fi biyya alatii guyya irreesaa safuu, seera Oromoon kabajuu, adda isaa, seena isaa kan ittin walbarsisuu waltajii isaa gudda ta’uu ibsame jira.
Iti dabaluun wagga kan yerro kami iyuu caalaa diin keenya kara hunda yamuu yaaka hama iliman Oromoo irrati geessa jiruu kan Gootoota Oromoo harka diina jiran kan akka isaan ba’aan waan hunda goochuuf, jajabesu, gargaruuf waada isaan galuuf, lammin Bilisummaa ummataa Oromoof jeechaa dararama jira fi kana dursasi Siirena Haile Silasee, siiran Dargi fi Siirena TPLF lubuu isaan weregan, midhama qama fi qalbii kan isaan irra ga’ee hundi Goota Oromoo ta’uun maogafamuu isaan ibsn. Isaan kana Keesssa Obbo Xilahun Hirphassa Siira Dargii fi TPLFn baroota dheeran jaaloota isaan waliin mana hidhatii dararami guddan irra ga’ee yerro ama kana ilee qama midhaman bara duluma siiran Habsha kami iyuu lagachuun hanga Bilisumman Oromoo mirkana’uuti kayyoo isaati fufun isaaf Goota Oromoo Umuri gutuu ta’uu isaanin waarqaan ragga keenamfi jira.
Qabsoo waggoota 40 lakbsisee kan hunda Kayyoo ganamati cicichuun darara hunda danda’uun qabsoo Bilisumma irra kan jira hundi Goota Oromoo Umuri gutua akka ta’aan labsamuun, dargagon Oromoo Qabsoo kana bakkan ga’uuf Gootoon kun ija hojii isaan akka argan goochuun wadda wal galan jiru. Qabsa'oon diiree bakkuma hundati qabsoo irrati kara hunda hirmacha jiran, lubuu fi dhiigga isaani gumachaa jiran, akkasumasi namoon yerroo isaan, malaqa isaan, hunman isaan, dandeetii isaan Bilisummaa Oromoof gumacha jiran Gootoota Oromo jeechun yerro si’ana maliif barbachisaa gaaf jeedhuu yoo jiratee jeechun isbsi keenama irra akka hubaneti, tokofaa qabsoon Oromoo qabsoo irra jira guyya bilisumma Abba Bilisummaa Oromiyya ta’uu isaan mirkansuuf, lamafaa warii qabsoon lafachuu isaan biirtan diina jala hiriraa jiran diina buqa’uuf jeedhuu jala akka hirirani seena isaani hin xureesinee gorsa keenuuf. Kanafuu qabsoo buleeyiin fi warii qabsoo eegala jira kayoo Bilisummati ummata isaan irra akka hin dheesine fi Habasha jala hin hiiririna barsisuuf jeedhani jiru.
Siiran kana irrati Nyaatii fi dhuggati dhiyeesun Arjumaa fi garuma Oromoo agrisisun hanga galgalati jalala Oromoumma isaa dhugga waliin hirmacha olamee.
Belgium Antwerpen Onkololessa 2 bara 2011